ဟောင်ကောင်တွင် မုန်တိုင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန် (KOPPU-update) | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
ဟောင်ကောင်တွင် မုန်တိုင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန် (KOPPU-update)
September 14, 2009 — mmweather
ဟောင်ကောင်တွင် တစ်နာရီ ၉ဝ ကီလိုမီတာ(၅၆ မိုင်) နှုန်းဖြင့် တိုက်ခတ်လာမည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KOPPU နီးကပ်လာသဖြင့် မုန်တိုင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရပါသည်။
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KOPPU ကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် လူ ၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ဟောင်ကောင်စံတော်ချိန် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ဟောင်ကောင်မှ တောင်-အရှေ့တောင်ဘက် ကီလိုမီတာ ၂၈ဝ (၁၇၃ မိုင်ခန့်) သို့ရောက်ရှိဗဟိုပြုနေသော မုန်တိုင်း KOPPU ကြောင့် တစ်နာရီလျှင် ၄၁ ကီလိုမီတာမှ ၆၂ ကီလိုမီတာ နှုန်း(၂၅မိုင်မှ မိုင်၎ဝနှုန်း)အထိရှိသည့် လေပြင်းများတိုက်ခတ်လာနိုင်ကြောင်း ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ဟောင်ကောင်တောင်ဘက်မှ ဖြတ်ကျော်ပြီး နောက်တစ်နေ့ နံနက် ဟောင်ကောင်စံတော်ချိန် ၈ နာရီခန့်တွင် တရုတ်ပြည် ကမ်းရိုးတန်းကို Yangiang မြို့အနီးမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သတိပေးကြေငြာချက်တွင် ဖေါ်ပြပါရှိပါသည်။
Three Killed – Koppu, the 16th storm of the western Pacific cyclone season, left three people dead and three injured in the Philippines as it passed across the northern tip of Luzon on Sept. 12 asatropical depression, the country’s disaster agencysaid.
Posted in Uncategorized, Weather News. Tags: KOPPU, tropical-storm, weather. LeaveaComment »
« တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI_WAN (FIFTEEN) အခြေအနေ
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KOPPU update-2 »